Ukubuka okumangalisayo okuvela ku-Riad Atlas Panorama - I-Airbnb
Ukubuka okumangalisayo okuvela ku-Riad Atlas Panorama
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Rachid
Indlu yethu yezivakashi ingeyabo bonke abafuna ukuzitika ngezigigaba noma labo abasuke befuna ukuthula kwezintaba.
Itholakala emasangweni e-Toubkal National Park, i-Riad Atlas Panorama inombono omuhle phezu kwedolobhana nezindawo ezizungezile. Igumbi ngalinye linovulandi walo wangasese kanye nendlu yangasese enamashawa ashisayo kanye nesiphephetha-moya esihlinzeka ngegumbi elifudumele. Ibhulakufesi lamahhala linikezwa elingadliwa phezu kwethala noma phezulu kophahla ukuze uthole ukubukwa okumangalisayo.
Sinikeza lonke uhla lwemisebenzi yezintaba, ukudluliswa kwesikhumulo sezindiza nanoma yiluphi olunye uhlobo lwesidingo sokuthutha. I-Riad Atlas Panorama itholakala kalula ngezinyawo noma ngemoto futhi ingaphakathi kwebanga elifinyeleleka kuzo zonke izindawo ezibalulekile zedolobhana.
4.74 · 39 okushiwo abanye
Okuhlangenwe nakho okungenakulibaleka kokubukwa okumangalisayo kwe-Atlas Mountains kanye ne-Mount Toubkal.